vSlice စျေး - အွန်လိုင်း VSL ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို vSlice (VSL)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ vSlice (VSL) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ vSlice ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $58 264.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ vSlice တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
vSlice များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
vSliceVSL သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00135vSliceVSL သို့ ယူရိုEUR€0.00115vSliceVSL သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00103vSliceVSL သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00123vSliceVSL သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0123vSliceVSL သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00853vSliceVSL သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0299vSliceVSL သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00503vSliceVSL သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0018vSliceVSL သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00189vSliceVSL သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0307vSliceVSL သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0105vSliceVSL သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00714vSliceVSL သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.101vSliceVSL သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.225vSliceVSL သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00186vSliceVSL သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00204vSliceVSL သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.042vSliceVSL သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00943vSliceVSL သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.143vSliceVSL သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1.61vSliceVSL သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.513vSliceVSL သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0994vSliceVSL သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0376
vSliceVSL သို့ BitcoinBTC0.0000001 vSliceVSL သို့ EthereumETH0.000003 vSliceVSL သို့ LitecoinLTC0.00002 vSliceVSL သို့ DigitalCashDASH0.00002 vSliceVSL သို့ MoneroXMR0.00002 vSliceVSL သို့ NxtNXT0.112 vSliceVSL သို့ Ethereum ClassicETC0.00019 vSliceVSL သို့ DogecoinDOGE0.4 vSliceVSL သို့ ZCashZEC0.00002 vSliceVSL သို့ BitsharesBTS0.052 vSliceVSL သို့ DigiByteDGB0.0516 vSliceVSL သို့ RippleXRP0.0045 vSliceVSL သို့ BitcoinDarkBTCD0.00005 vSliceVSL သို့ PeerCoinPPC0.00489 vSliceVSL သို့ CraigsCoinCRAIG0.632 vSliceVSL သို့ BitstakeXBS0.0591 vSliceVSL သို့ PayCoinXPY0.0242 vSliceVSL သို့ ProsperCoinPRC0.174 vSliceVSL သို့ YbCoinYBC0.0000007 vSliceVSL သို့ DarkKushDANK0.444 vSliceVSL သို့ GiveCoinGIVE3 vSliceVSL သို့ KoboCoinKOBO0.316 vSliceVSL သို့ DarkTokenDT0.00125 vSliceVSL သို့ CETUS CoinCETI4
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Tue, 04 Aug 2020 20:20:03 +0000.